बाबुकै कारण छोरीको भविष्य अन्धकार देख्छु भन्दै छिमेकीले गरे कमलाको बुवाको बारेमा यस्तो कुरा ! (भिडियो सहित) – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /Video/बाबुकै कारण छोरीको भविष्य अन्धकार देख्छु भन्दै छिमेकीले गरे कमलाको बुवाको बारेमा यस्तो कुरा ! (भिडियो सहित)
यसैबीच नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा आफुलाई स्थापित गराएर नाम र दामको अपेक्षासहित धादिङ निवासी राजन परियार पनि गायक बन्ने सपना बोकेर काठमाडौँ आइपुगेका छन्। मिठो स्वरका धनि उनि निकै मिठो गीत गाउँछन्। संगीत नसिकेका उनले संगीत सिक्न जरुरि भएको बताएका छन् । शिव परियारलाई आफ्नो आइडल मान्ने नव गायक राजनले मिडियासँग कुरा गर्दै कमला घिमिरेको बारेमा बोलेका छन्।
सानै उमेरमा लाइभ दोहोरी गाएर सबैलाई चकित बनाएकी धादिङकी कमला घिमिरेको छिमेकि समेत रहेका राजनले आफु र कमला एकै बिद्यालयमा अध्ययन गरेको बताएका छन्। बुवाको कारणले कमला पछि पर्ने हुन् कि भनेर चिन्ता ब्यक्त गरेका छन् उनले । मिडियाको साहारामा चर्चामा आएकी उनको करियर उनकै बुवाले कता धकेल्न लाग्दैछन् त ?
कमला घिमिरेलाई सहयोग नगर्ने भन्दै एलिजा गौतम मिडियामा आएकी थिईन्। एलिजाले अब कमलाको परिवारलाई सहयोग गर्न सोच्नु पर्ने बताएकी थिईन्। कमलालाई यस्तै सस्कार सिकायो भने भोलि के होला ?’ एलिजाले चिन्ता जनाउदै कमललाई अब पढ्न ध्यान दिनु पर्ने नत्र आफु सहयोग नगर्ने जानकारी दिएकी छिन्।
हेरौँ भिडियोमा नव गायक राजन परियार सँग गरिएको कुराकानी भिडियोमा :